Iindaba - 2020 Wenzhou Golden Eagle Pump Valve Exhibition / Exhibition International Pump valve Exhibition / Dibana nawe e-Oubei yongjia ngo-Okthobha 23
2020 Wenzhou Golden Eagle Pump vana Valve Exhibition / International Impompo ivelufa Exhibition / Dibana nawe Oubei yongjia ngo-Oktobha 23
2020 Wenzhou Golden Eagle Pump vana Valve Exhibition / International Pump Valve Exhibition / Dibana nawe Oubei yongjia ngo-Oktobha 23
I-15th Wenzhou (Golden Eagle) Impompo yevalufa Exhibition / Exhibition yevalufa / Exhibition yempompo ivelufa / Exhibition Impompo vana vana / Impompo inkampani / imveliso vana vana / iya kubanjelwa Wenzhou Yongjia Oubei Culture kunye Sports Square ukususela ngo-Oktobha 23-25, 2020!
I-15th Wenzhou (Golden Eagle) Pump Valve Exhibition iye yaphuculwa ngokwemiqathango isikali, umgangatho kunye neenkonzo ezivela, kunye neminquba engama-650 kunye nendawo yomboniso eqikelelweyo ye-20,000 square metres. Qhubeka ukomeleza abaphulaphuli abaqeqeshiweyo basekhaya kwaye iJamani, i-Italiya, iKorea, iSingapore, i-Indiya, iVietnam kunye nabanye abathengi bamanye amazwe baququzelele ukumenywa, kwaye umbutho womzi-mveliso wokugqibela uya kumenywa kumboniso obanzi wempompo yevalufa, izixhobo zombhobho, ezinje ngetekhnoloji yakutshanje kunye neemveliso, ifildi yempompo yeshishini levalufa ukubonelela ngemveliso esemgangathweni, itekhnoloji yakutshanje kunye nezisombululo.
I-PVPEW 15th Wenzhou (Golden Eagle) Umboniso wempompo yevalufa ngumboniso wempompo wasekhaya owenzelwa umboniso wempompo.
Ukusukela wenzhou Jinying Media Co, LTD. Ubambe umboniso wempompo yobuchwephesha ngo-2004, iimpembelelo zawo bezikhula kwaye isikali sayo siye sanda, kwaye iye yaba sesinye seziganeko ezibaluleke kakhulu kolu shishino. Umboniso ubonakalisa ngokucacileyo amandla kwimpompo kunye ne-valve ye-China, ngakumbi "idolophu yempompo kunye ne-valve yaseChina"; Ukuqhubela phambili ukuphucula ukubonakala kunye nefuthe lempompo yeWenzhou kunye nomzi mveliso wevelufa ekhaya nakumazwe aphesheya; Yazisa ngeetalente zakwamanye amazwe, itekhnoloji, ulawulo kunye nemali yokuphucula kunye nokuguqula amashishini emveli, ukukhuthaza ukwenziwa kunye nokuphuculwa kobume bemizi-mveliso, kunye nokuphucula ukhuphiswano lwamashishini; Ukongeza ukongeza imveliso ye-wenzhou yokumpompa ishishini lokuthengisa, ukuthengisa ingeniso yotshintshiselwano lwangaphandle; Kubaluleke kakhulu kwimbali nangokubonakalayo ukuqhubela phambili ukukhuthaza ukukhula okuqhubekayo, okukhawulezayo kunye nokusempilweni kweYongjia, iWenzhou kunye nempompo yase China kunye nomzi mveliso wevalufa.
Emva kweminyaka yophuhliso, impompo Wenzhou kunye noshishino vana ngoku ngaphezu 3.110 amashishini, kuquka 523 amashishini kunye nexabiso yemveliso yuan ngaphezu kwezigidi ezingama-20 yuan. Ngama-77 amashishini obugcisa obuphezulu beentlobo ezahlukeneyo. Iindawo zokudityaniswa kwemizi-mveliso ikakhulu zise-Oubei, eLongwan naseRuian. Ngo-2019, ixabiso lilonke lemveliso kushishino liphela lafikelela ngaphezulu kwe-45 yezigidigidi ze-yuan, ngokukhula konyaka-kwi-9%.